ပရိသတ်တွေက ကိုယ့်ကိုရယ်ပြရင် ဂျူးဂျူးလေ အရမ်းကိုပျော်တာ အရမ်းလဲစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့ပြောတဲ့ ဂျူးဂျူးကေ
Category: စတားများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း	Published: 25 March 2012	မေး - ငယ်ငယ်က သင်္ကြန်ဖြတ်သန်းမှုလေး ပြောပြပါဦး။
ဖြေ - ဂျူးဂျူးငယ်ငယ်ကတည်းက သင်္ကြန်ဆိုရင် မိသားစုနဲ့နေဖြစ်တာများတယ်။ သင်္ကြန်မှာ အမေတို့က အပြင်ပို့ပေးရင်တော့ လျှောက်သွားဖြစ်တယ်။ မပို့ပေးရင်တော့ လမ်းထဲကသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲ ဆော့တာပေါ့နော်။ ဂျူးဂျူးမှာ အကျင့်ရှိတယ်။ သူများပျော်ရင် အဲဒီသူထက်ပိုပျော်တတ်တယ်။ လမ်းထဲမှာကစားတော့ သူငယ်ချင်းလေးတွေနဲ့ အရမ်းကို ပျော်ခဲ့ရတယ်။
Read more...	ကလေးတွေကို ကြိမ်လုံးတစ်ချောင်းနဲ့ စာသင်ချင်တယ် ဆရာလုပ်ချင်တာ ပွင့်နဒီမောင် Written by မီမီး	Details
Category: စတားများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း	Published: 24 March 2012	Q. ပိုးအိဆယ်ကျော်သက် ဘဝက ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ အိမ်မက်က ဘာလဲ။ A. ပိုးအိဖြစ်ချင်တာ ဆရာမ၊ ကလေးတွေကို စာသင်ချင်တာပေါ့။
Q. ဆရာမအလုပ်ကို ဘာဖြစ်လို့ မလုပ်ခဲ့တာလဲ။ A. ပိုးအိ ဆယ်ကျော်သက်ဘဝကသာ ဖြစ်ချင်ခဲ့တာ ကြီးလာတော့ ဝါသနာသိပ်မပါတော့ဘူး။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ အရမ်းပဲ ဖြစ်ချင်ခဲ့တာပေါ့။ ကလေးတွေကို စာသင်ချင်တာ၊ ကြိမ်လုံးတစ်ချောင်းနဲ့ပေါ့။ ဆရာလုပ်ချင်ခဲ့တာပေါ့လေ။ ရည်ရွယ်ချက် မထားတတ်ခင်အရွယ်ကပေါ့။
Read more...	ဖြစ်ချင်ပြီဆိုရင် လုပ်ကိုလုပ်ရမှဆိုတဲ့ ချစ်သုဝေ
Category: စတားများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း	Published: 21 March 2012	မေး - ကိုယ့်ကို စိတ်အပန်းပြေစေတဲ့ နည်းတွေထဲက ပရိသတ်မသိသေးတဲ့ နည်းတစ်နည်းက ဖြေ - သီချင်းဖွင့်ပြီးကတာ၊ မှန်ရှေ့မှာ သီချင်းဖွင့်ပြီး ကချင်သလို ကရတာ စိတ်အပန်းပြေစေတယ်။ Read more...	အောင်မြင်ကျော်ကြား အနုပညာရှင်များရဲ့ လျှို့ဝှက် စကား မိစန္ဒီ
Category: စတားများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း	Published: 09 March 2012	မေး - သူငယ်ချင်းတွေပေးထားတဲ့ လျှို့ဝှက် နာမည်
ဖြေ - သူငယ်ချင်းတွေကတော့ ကိုယ့်ကို သွားကျိုး ဆိုပြီးခေါ်ကြတယ်။
Read more...	ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ သေချာပြီဆိုရင် ဘယ်သူကြိုက်ကြိုက် မကြိုက်ကြိုက် မကြောက်တော့ဘူးလို့ ပြောတဲ့ လူမင်း
Category: စတားများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း	Published: 22 February 2012	Q. ရုပ်ရှင်လာမရိုက်နဲ့ ဇာတ်ကားက သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ မီဒီယာလောကကို သရော်ထားတဲ့ ပုံစံလေးတွေ ပါတယ်နော် A. အဲဒါက မူရင်းက အိန္ဒိယဇာတ်ကားရဲ့ Plot တွေပါပဲ။ သပ်သပ် ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ ပုံစံတွေကို ထင်ဟပ်စေတဲ့ပုံစံမျိုးကို ထည့်ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ Read more...	အောင်မြင်ကျော်ကြား အနုပညာရှင်များရဲ့ လျှို့ဝှက်စကား စိုးပြည့်ပြည့်စံ
မွေးနေ့ဝတ်စုံကြီးဝတ်ပြီး ကိတ်မုန့်ပေါ်က ဖယောင်းတိုင်မီးတွေကို မှုတ်ရမှာ တော်တော်ဝန်လေးတယ် လို့ပြောတဲ့ သူထူးစံ
မိန်းမတွေကြောင့် ကွဲသွားတဲ့အသည်းကို မိန်းမတွေနဲ့ပဲ ပြန်ကုစားရတယ်ဆိုတဲ့ စကားကို သိပ်ကြိုက်တယ်လို့ ပြောတဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် အခုထိ မချစ်တတ်သေးဘူး ရတနာမိုင်
အောင်မြင်ကျော်ကြား အနုပညာရှင်များရဲ့ လျှို့ဝှက်စကား “ရဲသီဟကို”
Start Prev4567 8910 11 12 13 Next End Page9of 79